Nhau - Zivo yesimbi sintering firita chinhu
Kuziva nezve simbi sintering firita chinhu
1. pane chakamisikidzwa chiyero chikamu cheiyo sintered firita chinhu? Ini ndinogona kutenga standard firita element?
A: ndine hurombo, iyo sintered firita chinhu hachisi chikamu chakajairwa. Kazhinji, inogadzirwa nemugadziri zvinoenderana nematanho ehunhu hwakadzama senge saizi, chimiro, zvinhu uye sefa kukosha kwakatarwa nemutengi.
2. Ndezvipi zvinhu zvinogona kusarudzirwa sintering firita chinhu?
A: ndarira, ndarira, simbi isina chinhu, titanium uye alloys dzakasiyana siyana zvakajairika. Zvakajairika kuti bronze inoshandiswa mukusvina sefa chinhu indasitiri, uye alloy simbi ndiyo yakaderera mutengo. Icho chikonzero nei vatengi vachida kusarudza mamwe masimbi esimbi kana maalloys anogona kunge ari nekuda kwenzvimbo dzakasiyana dzebasa, senge kuomarara kwepamusoro, kurwisa kwenyonganiso iri nani, kana tembiricha yakakwira. Simbi isina simbi zvakare irwo rudzi rwechinhu chinoshandiswa zvakanyanya, nekuda kwekupisa kwayo kupisa uye ngura kuramba kwakanaka kwazvo. Kune mamwe mamiriro akaomesesa, nickel alloys inogona kudikanwa. Ehezve, mutengo weaya maalloys wakareba uye wakaoma kugadzirisa, saka mutengo unenge wakakwira
3. Chii chinofanirwa kutariswa mukugadzirwa kwesimbi sintering firita chinhu
Mhinduro: kana uchisarudza iyo firita chinhu, isu tinofanirwa kufunga nezve iyo firita yepakati, kukosha kwefirita, kuyerera chiyero kuburikidza nefaera, shandisa nharaunda, nezvimwe zvinoshandiswa zvakasiyana zvinoda mafirita akasiyana. Mukugadzira, iwe unofanirwa kufunga nezve anotevera mapoinzi:
1) Pore saizi: zvakare mune micron chiyero. Kukura kwepore kunotsanangura saizi yemidhiya yaunoda kusefa
2) Kumanikidza kudonha: zvinoreva iyo mvura kana kuyerera kwegesi kuburikidza neiyo kusefa kumanikidza kurasikirwa. Iwe unofanirwa kuona yako yekushandisa nharaunda uye uipe iyo kune iyo firita inogadzira.
3) Tembiricha renji: yakakwira sei iyo inoshanda nharaunda tembiricha yeiyo firita chinhu mukushanda kwayo? Iyo simbi alloy yaunosarudza yefaira firita inofanirwa kukwanisa kumira nekupisa kwenzvimbo yekushanda.
4) Simba: sintered firita zvinhu ndizvo zvakanaka sarudzo yesimba simba. Imwe mukana ndeyekuti vane simba rakafanana kumberi kana kuyerera kuyerera.
4. Ndeapi ruzivo rwandinoda kupa kumugadziri kuti aise odha?
1) Kunyorera: kusanganisira kushandisa nharaunda, kusefa kukosha, nezvimwe
2) Sefa midhiya
3) Chii chinofanirwa kubhadharwa, senge acid uye alkali kuramba
4) Pane chero akasarudzika mashandiro ezvinhu, senge tembiricha uye kumanikidza
5) Ndezvipi zvinosvibisa zvichasangana nazvo
6) Chimiro, chimiro uye kushivirira
7) Huwandu hunodiwa
8) Maitiro ekuisa
Stainless Simbi Sefa, YeMotokari Sefa, Industrial Gasi Sefa, Sefa Yemvura, Mafirita Emhepo, Stainless Simbi Mhepo Kuchenesa,